Global Voices teny Malagasy » Sivana Shinoa: Mahatonga Ny Media Sosialy Tsy Hampiseho Afa-tsy Vaovao Tsara Momba Ny Tondrandrano · Global Voices teny Malagasy » Print
Sivana Shinoa: Mahatonga Ny Media Sosialy Tsy Hampiseho Afa-tsy Vaovao Tsara Momba Ny Tondrandrano
Voadika ny 01 Aogositra 2016 12:31 GMT 1	 · Mpanoratra Oiwan Lam Nandika Tantely
Sokajy: Azia Atsinanana, Shina, Fanampenam-bava, Fanoherana, Mediam-bahoaka, Voina
Miaramila mpamonjy loza, mitondra goninà fasika sy mihinana menakely. Dikasary avy tamin'ny CCTV.
Nandray anjara fototra tamin'ny tohin'ny zava-doza nikapoka an'i Shina ny media sosialy. Taorian'ny horohorontany tao Sichuan ny taona 2008 , nampiasaina handrindràna ny asan'ny famonjena voina ny Weibo ilay toy ny Twitter-ny Shina. Ary taorian'ny fipoahana tao Tianjian tamijn'ny taona lasa , satria tsy dia naneho loatra ny zava-nitranga ny media teo an-toerana  na samy tsy niraharaha daholo ny zava-nitranga, nandefa sy nanaparitaka ireo sary voalohany teo an-tànana ary nanome vaovao hatrany ireo mpampiasa vohikala.
Toerana ho an'ireo niharan-doza mba hanehoana ny alahelony sy hifampitadiavana ary hifanohanana ny media sosialy. Toerana ihany koa ho an'ireo olompirenena handefasana ireo fahitàny manokana ny zava-mitranga sy hitaterany– na toa miafara amin'ny famafàn'ireo mpanivana henjana ao Shina azy ireny aza.
Izany no mitranga amin'izao, amin'ireo vaovao mifandray amin'ilay tondradrano midadasika be , mahakasika faritany 26. Hatreto, eo amin'ny olona miisa 1,5 tapitrisa no nafindra toerana ary miisa 180 ireo maty. Eritreretin'ny Antoko Kaominista Shinoa fa tokony ho tsara ireo vaovaon'ny loza ary mifanaraka amin'ny foto-pisainany, avy amin'izany no miteraka ny tsy fahampian'ny loharanom-baovao mitsikera sy tena mandona araka ny tokony ho izy.
Maro ireo mpisera amin'ny Aterineto no nitaraina tamin'ny famafàna ireo vaovaon'ny tondradrano tao amin'ny Weibo. Nanoratra  izao ny mpampiasa Weibo iray, avy tamin'ny faritanin'i Anhui:
Mamonjy ny firenena i Anhui [ilay faritany, eo antenantenan'ny làlan'ny Renirano Yangtze, dia toerana famoahana ny tondradrano], fa tsy misy kosa na iza na iza manavotra an'i Anhui. Niantso ny fianakaviako aho, na efa nitsahatra telo andro aza ny orana, mbola ambony be hatrany ny halalin'ny rano ary mbola manao asa famonjena hatrany ireo manamboninahitry ny polisy mitam-piadiana ao an-toerana. Indraindray, rehefa manao fanehoankevitra mikasika ny eny an-kianja ao Anhui aho, misy mamafa ilay fanehoankevitra. Tsy misy dikany mihitsy io, an-taonany maro izay, nanao sorona ny tenany i Anhui ho an'ireo tanàna ambany toerana ary ireo faritany tsy mitovy aminy mba hanana fahafahana mandroso. Ankehitriny rehefa tondraky ny rano izahay, tsy afaka na dia maneho hevitra mikasika io fotsiny aza?
Nahazo tamberina maro tao amin'ny sehatra fanehoankevitra ilay fitarainany:
– 我们这边也是 虽然晴天 但是水位不退 有时候还涨 不下雨 但是大家都开心不起来了 发消极的微博还被删评论冻我账号 真无语了
- Angatahana hilaza zavatra tsara hatrany isika, misaina tsara hatrany ary vendrana. Akimpio ny masontsika ary ny Tena Marina resahana! Mitandrema tsara, mety ho bahanan'izy ireo tsy hiteny ianao.
– Mitovy isika eto. Mijanona ny orana fa mbola tsy misy fiovàna ny haavon'ny rano. Indraindray aza mitombo io. Tsy faly ny olona. Rehefa milaza zavatra ratsy aho, fafàna ireo fanehoankevitro ary ahantona ny kaontiko. Tsy mahaloa-bava aho.
Vaovao voabahana avy any ivelan'i Shina no namoaka fa namono olona am-polony vitsivitsy ny tondradrano any Anhui. Olona an-jatony nharan'ny tondradrano  no nanao fihetsiketsehana ny 8 Jolay, nanohitra ny tafatafan'ny Fahitalavitra “Chinese Central Television” (CCTV) an'ny fanjakana niaraka tamin'ireo tomponandraikitry ny famonjena voina, izay nilaza fa takaitra tamin'ireo làlana lehibe roa monja no navelan'ilay tondradrano.
Mazava ho azy, tsy afaka hita ao amin'ny Webio ireo vaovao mikasika ilay hetsi-panoherana. Ireo vaovao mikasika ny fihetsika mahery fo sy fanaovana sorana ny tenany tamin'ny fandraisana anjara tamin'ny famonjena ny loza nataon'ny Tafi-Panafahan'ny Vahoaka no miparitaka be. Nofintininìilay mpanao gazetin'ny CCTV ny tatitra an-dahatsary momba ilay raharaha tao amin'ny lahatsoratra Weibo, sady nampiany pikantsary. Iny avy eo no naverin'ireo mpamoaka vaovao lehibe  sy “mpirotsaka an-tsitrapo amin'ny sivilizasiôna” — mpikambana amin'ny Ligin'ny Tanora Kaominista ao Shina izay manindrahindra ny hafatry ny antoko ety anaty Aterineto:
Fankasitrahana ho an'ireo olona mahafinaritra! Any amin'ny toerana mafy, mamindra ireo gonim-pasika izy ireo, tsy miakanjo aro-orana ary feno fotaka ny vatany. Milanja 60 “catty” [eo amin'ny 36 kilao] ny lanjan'ny gonim-pasika iray, ary samy nitondra 300 amin'ireo ny tsirairay avy no sady nila niverimberina in-600 ; nifangaro tamin'ny orana ny rano sy ny menakely ary ireo no sakafony isan'andro… isaky ny misy loza, mipoitra foana ireo miaramila mpamonjy loza. Mankasitraka!
Maro ireo mpisera amin'ny Aterineto tsy taitran'ilay fampielezankevitra. Ito ambany ito ny ohatra amin'ny fisalasalàna hita tao amin'ireo filaharan'ny fanehoankevitra:
- Isaky ny mamaky ny karazana kaonty toy izao aho, misalasala foana. Manova ny zava-misy mikasika ny tsy fahampian'ny fitaovan'ny mpamonjy voina sy ny fandrindràna asa ho tantara “mampanetsetra” ilay fampielezankevitra ofisialy. Mampiasa ny hatsembohana sy ny ràn'ireo miaramila any amin'ny laharna voalohany [ho amin'ny tanjona politika] ny fihetsika toy izany. Isaky ny mihetsika, ataon'izy ireo ho loza lehibe indrindra tato anatin'ny 100 taona foana ny loza mitranga ; isaky ny mihetsika, ampiasain'izy ireo ny loza mitranga mba hisintonana ny fihetseham-pon'i Shina. Tsara ho an'ny fanovàna ny loza ho tantara tsara ary hanafenana ireo tsy mety amin'ny olona ilay fampielezankevitra.
– Feno fanajàna ireo olona tena mahafinaritra indrindra. Fa nahoana amin'izao firenena matanjaka izao no tsy misy ekipa mpanaraka azy ireo mba manome aro-orana sy sakafo?
– Tsy afaka omenareo na dia saosisy iray aza ve izy ireo? Ary ataonareo ao aminà vaovao izany ? Tsy mba afaka mikarakara ireo olona miaro ny firenena ianareo, henatra ho anareo izany.
Ao amin'ny Twitter, nanindry feo kokoa tamin'ny tsikera sy ny fanivanana ary ny fampielezan-levitra mikasika ireo tondradrano, ireo mpitari-kevitra. Wu Zuolai, mpitoraka blaogy momba izay raharaha mitranga, milaza fa mety hahatonga ireo olona hampitsahatra ny fanomezany amin'ny asa famonjena loza ny fanodinkodinana ofisialy atao amin'ny vaovao:
— 吴祚来 (@wuzuolai) July 3, 2016 
Navadika ny vavahadim-baovaon'i Sina ho lasa CCTV. Na ahoana ny haben'ny loza, mikasika ny Filoha Xi ny lohatenim-baovao goavana voalohany, avy eo arahan'ny praiminisitra. Lasa vaovao sokajy faharoa ilay tondradrano any atsimo, izay niteraka fahafatesana sy faharatràna tsy voaisa. Fa niova ihany koa ny olona, na “mampihetsi-po” toa inona aza ireo tatitra, tsy misy manao fanomezana. Satria tsy olan'ny olona io [fa olan'ny antoko]. Manana mpikambana 80 tapitrisa isa ny Antoko Kaominista Shinoa, raha samy manome 100 ny tsirairay amin'izy ireo, hahavitàna manangona 8 lavitrisa io ho an'ny fetin'ny fitsingerenan'ny taonan'ny antoko. Tsy mila mandray anjara amin'io ny olona.
Ary niresaka ny olan'ny fandraisan'andraikitry ny governemanta i Gao Yu, mpanao gazety Shinoa malaza, izay any iharan'ny tsy fahafahana mivoaka ny tranony noho ny famoahana antontan-taratasin'ny antoko:
— 高瑜 (@gaoyu200812) July 7, 2016 
Ankehitriny, tondraky ny rano Wuhan [ao amin'ny faritanin'i Hubei] ary mahatratra 30 tapitrisa ny isan'ireo olona voakasik'izany. Kanefa, mbola afaka mankafy ny lohataonany ihany [ny Praiminisitra Shinoa teo aloha] Li Peng sy ny fianakaviany. Ny antony, satria nanaraka ny fomba fiasany nandritra ny 67 taona ireo mpamonjy voina [hatramin'ny nisokafan'ny toerana tamin'ny Repoblika Entim-bahoakan'i Shina ny taona 1949]: miady amin'ny tondradrano miaraka amin'ny menakely ho sakafony ny miaramilam-bahoaka; manao fisehoana eny anoloana ireo mpitondra; saronana ny marina mikasika ny aina sy ny fananana nafoy; avadika ho fanindrahindràna ao amin'ny media ny hadisoana sy ny fandraisana andraikitra.
Olona fototra aorian'ny fanorenana ilay Three Gorges Dam, tohodrano goavana miteraka resabe ao amin'ny Renirano Yangtze ny Praiminisitra teo aloha Li Peng. Natao hahavita hiatrika ireo tondradrano indray mandeha ao anatin'ny arivo taona ilay tetikasa. Kanefa, ny tena marina, nanova ny toetrandro tany Yangtze ilay tetikasa, nahatonga haintany goavana tamin'ny fahavaratry ny taona 2006  ary ny lohataonan'ny taona 2010 . Ary rehefa avoaka avy ao amin'ireo tohodrano ny rano, mijaly amin'ny trondradrano be ireo faritany any ambany any.
Sady izay indray, nanentsina ny fitsihan'ny rano mandritra ireo tondradrano, ny fakàna ireo farihy any afovoan-tanàna  sy ireo faritra mando  hanaovana tetikasa fampandrosoana ny tanàna avo lenta. Fa eo ambanin'ilay rafitra fanivanana ankehitriny, nolazaina ho manely tsaho ny tsikera mampifandray ilay tetikasa fampandrosoana sy ireo tondradrano, ary ny hany “marina lehibe” momba ny tondradrano dia ireo Miaramilam-bahoaka mahefy fo, eo ambany fitantanan'ny antoko.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/08/01/85212/
 horohorontany tao Sichuan ny taona 2008: https://en.wikipedia.org/wiki/2008_Sichuan_earthquake
 fipoahana tao Tianjian tamijn'ny taona lasa: https://en.wikipedia.org/wiki/2015_Tianjin_explosions
 tsy dia naneho loatra ny zava-nitranga ny media teo an-toerana: https://globalvoices.org/2015/08/18/tianjin-lives-up-to-its-city-without-news-nickname-after-deadly-blasts/
 tondradrano midadasika be: http://www.cinic.org.cn/site951/cjyj/2016-07-07/827590.shtml
 Olona an-jatony nharan'ny tondradrano: http://www.bannedbook.org/bnews/cbnews/ntdnews/20160709/555873.html
 mpamoaka vaovao lehibe: http://www.weibo.com/1974576991/DDp4s9cOw?refer_flag=1001030103_&type=comment#_rnd1468197142458
 July 3, 2016: https://twitter.com/wuzuolai/status/749469850204901376
 July 7, 2016: https://twitter.com/gaoyu200812/status/750952282632572928
 fahavaratry ny taona 2006: http://www.chinadaily.com.cn/china/2006-08/17/content_667496.htm
 lohataonan'ny taona 2010: https://en.wikipedia.org/wiki/2010_China_drought_and_dust_storms
 fakàna ireo farihy any afovoan-tanàna: http://www.aboluowang.com/2016/0709/767492.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter